अमिताभ वच्चनसँग पहिलो नजरमा नै जया वच्चनलाई भएको थियो प्रेम !! फिल्मी लवस्टोरी « गोर्खाली खबर डटकम
अमिताभ वच्चनसँग पहिलो नजरमा नै जया वच्चनलाई भएको थियो प्रेम !! फिल्मी लवस्टोरी
एजेन्सी २६ चैत्र । वलिउडका महानायक अमिताभ वच्चनको चर्चा चलि नै रहेको हुन्छ । कारण जे पनि हुन सक्छ, वच्चन साहेवको कनेक्सन त भई नै हाल्छ । अव एक्टरले आफ्नो क्षमतावाट यस्तो प्रशिद्धि हासिल गरेको कारणले पनि उनको अलि धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ ।
अमिताभ वच्चनकी धर्मपत्नी तथा राजनितिक गतिविधिवाट खवरमा रहिरहने जया वच्चनले सहि समयमा साथ दिएकी थिईन् । मुश्किल समयमा सहारा दिएकीले अहिले खुशीको समय विताउन पाईरहेका छन् ।
अमिताभको शुरुवाती क्यारियरमा १२ फिल्म फ्लप भए पछि उनि वलिउड छोड्न चाहन्थे । उनि मुम्वई फिर्ता गइरहेका थिए । तर जव उनले फिल्म जंजिर साइन गरे जसमा उनको अपोजिट थियो जया वच्चन । त्यही समय थियो अमिताभ वच्चनसँग कोही पनि नायिका काम गर्न चाहँदैन थे । कारण सिम्पल थियो अमिताभले कुनै खास फिलिम गरेको थिएन । तर जव जया वच्चनले अमिताभसँग फिल्म गरे तव दुवैको जिंदगी सधैंको लागि वदल्यो ।
अमिताभ र जयाको प्रेम कहानी पनि ज्यादै फिल्मी नै छ । उनिहरुको लव स्टोरीमा एकतर्फ पागल प्रेम छ भने अर्को तर्फ एक अर्काले कहिले नछोड्ने संकल्प छ । जया वच्चन भन्छिन्, उनको अमिताभ वच्चनसँग पहिलो भेट धेरै वर्ष अघि पुणेको फिल्म इंस्टीट्यूटमा भएको थियो । त्यहाँ जया पढ्न गएकी थिईन । तर त्यो वेलासम्म अमिताभ फिल्ममा धक्का खाईरहेका थिए । तर किनकी यो जोडी खास थियो त्यसैले उनिहरुको कनेक्सन पनि वलियो देखिएको थियो । जयालाई अमिताभसँग पहिलो नजर मै प्यार भएको थियो ।
जया भन्छिन्, अमिताभ वच्चनलाई आफु पातलो भएको कारणले धेरै किसिमको कुरा सुन्न पथ्र्यो । पुणेको इंस्टीट्यूटमा त धेरै मान्छेले उनलाई लट्ठी भनि वोलाउँथ्यो । यस कुरावाट जया धेरै दुःखी हुन्थिन् । उनि अमिताभको लागि आफ्नो साथिहरुसँग लड्थिन् ।
अमिताभले पनि जया वच्चनको वारे रमाईलो कुरा वताए । अमिताभले जयालाई पहिलो चोटी एक म्यागजिनको कभरमा देखेका थिए । उनलाई पनि पहिलो नजरमै ड्रिम गर्ल भेटेको महशुस भएको थियो ।
दुवैको मनमा एक अर्का प्रति प्रेम थियो । त्यस पछि भेटघाटको सिलशिला शुरु भयो । पहिले एक दुई चोटी त्यस पछि लगातार भेट भयो । यहि भेटघाटवाट नै एक अर्काको नजिक ल्यायो र प्रेम झन गाढा भयो ।
त्यस पछि उनिहरुको जंजिर फिल्म सफल भयो । अमिताभ र जयाले सफलताको उत्सव मनाउन विदेश जान चाहन्थे । तर अमिताभको वावुले विदेश जाने भए पहिले विवाह गर र जाउ भने । त्यसपछि वावुको आज्ञाको पालना गरि अमिताभले जया सँग १९७३ मा विवाह गरे ।
त्यसपछि त झन उनिहरुको सम्वन्ध प्रगाढ हुँदै गयो । उनिहरुको यो प्रगाढता जंजिर, अभिमान, चुपके चुपके, मिलि, शोले र कभि खुशी कभि गम जस्तो फिल्ममा देखियो । वलिउडले अमिताभ र जयाको जोडीलाई अल टाई हिट्स् जोडिको रुपमा लिने गर्दछ ।
अङ्गद बेदीले आफ्नो पत्नी नेहा धूपियालाई लाइभ भिडियोमा गरे वेवास्ता, मानिस वोले, भाउजु पछाडीवाट आवाज दिंदैछिन् !!
एक्ट्रेस तमन्ना भाटियाको प्राइभेट जेटमा क्याप्टेन विराट कोहली !! फ्यान्स्का प्रश्न, विराट के गर्दै छ त्यहाँ ?
काजोलसँग दोश्रोपटक भेट्न चाहँदैनथे अजय देवगन, कारण के थियो ? थाहापाउनु होस् ।